I-Universal-imilo kunye nobukhulu benzelwe iimoto ezininzi, iilori, iiveni kunye neeSUV. Ufuna kuphela isikere ukucheba umzobo womgangatho wesithuthi sakho. Unokubeka umqamelo ngaphandle kokutsala umva wakho.
I-Universal-imilo kunye nobukhulu benzelwe iimoto ezininzi, iilori, iiveni kunye neeSUV. Ufuna kuphela isikere ukucheba umzobo womgangatho wesithuthi sakho. Unokubeka umqamelo ngaphandle kokutsala umva wakho. Hamba nje ngomsonto ude ufumane umhombiso ogqibeleleyo!
Ukusebenza okuphezulu-i-rubber ye-polymer formulations iye yavavanywa phantsi kweemeko ezigqithiseleyo ukuze kuqinisekiswe ukuba abayi kuqhekeka, baqhekeke okanye baphazamise. I-100% yepolymer ekumgangatho ophezulu engenavumba, i-footpad yethu ayinavumba kwaye ayinayo ityhefu ye-bisphenol A. Izithuthi aziyi kuboniswa kwiikhemikhali ezinobungozi kunye nevumba elibi. Nangona umnyango uvaliwe kwiqondo lokushisa eliphezulu, akukho phunga elikhethekileyo, ngoko bonke abagibeli bakhuselekile xa bengena emotweni (akukho kungena umoya ofunekayo)!
Into evikela amanzi-Ulwakhiwo olulodwa Imiqolo enqamlezileyo kunye nediagonal ibekwe ngobuchule kwiitreyi ezinzulu zezi mathi ukukhulisa isakhono sazo sokubambisa. Amanzi, ikhephu, udaka kunye nenkunkuma ziyalawulwa kwaye aziyi kubaleka okanye zivuze kwisithuthi. I-Anti-slip grip-i-rubber igxininiswe ezantsi, ngoko ke i-cushion ihlala ihlala kwindawo-i-ergonomic groove iphezulu, eya kunika iinyawo zakho ukutsala kunye nokuthuthuzela.
Umgangatho werabha kuwo onke amaxesha onyaka unokukhusela umgangatho wemoto yakho kwimpembelelo ye-dette kunye ne-rubble; Indlela yokunyathela enzulu ephuculweyo inokwamkela amanzi, ikhephu nodaka; Ikhaphethi i-claw anti-slip splint inokugcina indawo yomgangatho we-mat kwimozulu engaphantsi kwe-zero: isuti yomgangatho we-mat yenzelwe ukuba ifaneleke phantse nasiphi na isithuthi; Zenzelwe ukuqinisekisa ukuba iimethi zeemoto aziyi kugoba, ziqhekeke okanye ziqine kwimozulu engaphantsi kwe-zero: gcina izihlalo zangaphambili nezingasemva zeemoto zicocekile ixesha elide, kwaye uzixhobise ngeemethi ezahlukeneyo ezinobunzima; Khusela umgangatho wokuqala kwi-lawn esisigxina kunye nokungcola: zonke iinkcukacha zemoto yakho kufuneka zikhangeleke zigqibelele; Nceda ujonge iiragi zethu zangaphakathi nangaphandle zokucoca, ukuhlamba iimoto kunye neengxowa ze-waxing, ii-agent ezikhuselayo, i-foam yamavili, i-lens kunye nokunakekelwa kweglasi, i-air fresheners.
Ngaphambili: I-Automobile Electrostatic Film Side Block
Okulandelayo: I-Five-Piece Car Seat Cover
I-Moto Floot Mat
Iimethi zoMgangatho opholileyo weMoto
Iimethi zoMgangatho weMoto zokuhombisa